Madaxweyne Cagjar oo ku gacansaydhay deegaanno ay leeyihiin oo canfarta lagu daray
Home WARARKA Madaxweyne Cagjar oo ku gacansaydhay deegaanno ay leeyihiin oo canfarta lagu daray
Jigjiga-(Berberanews)-Madaxwaynaha degaanka soomalida Etiopia Mustafe cagjar ayaa diiday in degaamo Soomaalidu leedahay lagu daro kililka Canfarta.
Warqad uu maamulka deegaanka Soomaalida uu si toos ah ugu qoray guddiga doorashaada qaranka dalka Itoobiya ayuu deegaanka ku codasaday iney guddiga dooorashooyinka dib uga laabtaan go’aanka ay ka gaareen 30 goobood oo cod bixin ah oo hoos tagto 8 tuulo oo ka tirsan deegaanka Soomaalida goobo codbixin ay ka sameeyaan ayna ku soo celiyaan deegaanki ay horay uga tirsanaayeen.
Warqadda mamulka deegaanka Somaalida ka soo baxday waxaa kale oo lagu sheegay “seddex magaalo ama tuulo oo deegaanka Soomaalida ka tirsan oo kala ah Garba-Ciise (Gadamaytu), Cadeytu iyo Candhuufa iney horay labada deegaan isugu heysteen balse 3-da tuulo ee hore iyo 5-ta tuulo uu guddigu hadda ku soo daray inuu deegaanka Cafarta uu ka cabanayo, tani iyo marki deegaanka Soomaalida la aasaasay iney deegaanka ka tirsanaayeen sidaa darteed ay marnaba aqbaleyn go’aanka ka soo yeeray guddiga doorashooyinka qaranka ee dalka Itoobiya.”
Ugu dambeyntina, degaanka Soomaalidu warqadda uu guddiga doorashooyinka u qoray wuxuu kaga codsaday iney ka noqdaan go’aanka ay sheegeen inuu hal dhinac u jajeero kaddibna xaaladda si qoto dheer ay ugu kuur galaan oo tuulooyinkaasi 5-ti doorasha oo hore sidi ay doorashada uga soo dhacday in deegaan doorasho loo soo celiyo haddii ay sidaa dhici weydana deegaanka Soomaalida ay ku adkaaneyso iney doorashada soo socota ee dalka ka dhaceyso ka qayb qaataan.
Warqad maalinti shalay ahayd ka soo baxday xafiiska madaxweynaha DDS waxaa lagu shaaciyey maamulka deegaanka iney eegeen guddiga doorashooyinka oo ka duulayo cabasho uga timid deegaanka Canfarta go’aanka uu k agaaray inaan goobo codbixin laga sameyn 30 deegaan doorasho oo deegaanka Soomaalida horay u hoostagi jirtay.
Previous articleBiden says he will run for re-election
Next articleSiyaasadda Soomaaliya iyo Duruufaha ku xeeran